Iincwadi ezi-3 ngamayelenqe enkolo | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezi-3 ngamayelenqe enkolo
Ngemihla ebaluleke njengaleyo sihlangabezana nayo (iVeki eNgcwele) kwaye ngaphandle kwenjongo yokukhubekisa inkolo kunye nokomoya oluncinci kubo bonke abafundi bethu, namhlanje sikunika uluhlu kunye Iincwadi ezi-3 ngamayelenqe enkolo.
Uyazikhumbula ezo athengisa leyo ezisa "iyelenqe" ukuba nodumo Dan Brown? Ewe, baya beba ngaphezulu okanye ngaphantsi koku, kodwa ngokoluvo lwam, into ebhetele yokuthetha. Ke ukuba uyathanda ukufunda ingxelo kodwa uchukumisile kunye nenkqubo-sikhokelo yenkolo, qiniseka ukuba unomdla kwezi zihloko zilungileyo zi-5.
1 "Isangqa soMlingo" (1998, uKatherine Neville)
2 "Ihashe iTrojan" (1984-2013, uJuan José Benítez)
3 "IKato yokugqibela" (2001, Matilde Asensi)
"Isangqa soMlingo" (1998, uKatherine Neville)
Ukuba uhlala ubethwa yiyo yonke into ebandakanya iGrail eNgcwele, imibhalo-ngqangi elahlekileyo, ubomi obunokwenzeka njengesibini sikaYesu waseNazarete kunye noMary Magdalene, le ncwadi inokukuxhoma. "Isangqa somlingo" yenye yeencwadi zenkolo, imfihlelo kunye nokuthandabuza, ethengiswa kakhulu kule minyaka ingamashumi idlulileyo.
UAriyeli ufumana ilifa lemibhalo-ngqangi emidala egcina imfihlo enxulunyaniswa nezinto ezingcwele zezizwe zakwaSirayeli. Nabani na okwaziyo ukuzityhila uya kufumana ubulumko obaneleyo bokufumana ukuzalwa kweentsomi, iinkolelo kunye neempawu zazo zonke iinkcubeko ezinkulu zembali, kunye nezitshixo zokutolika ikamva. Ngokwendalo, nje ukuba iAriyeli ifumane ilifa, iba yinto ekugxilwe kuyo ngabalinganiswa ababawayo abambalwa.
"Ihashe iTrojan" (1984-2013, uJuan José Benítez)
"Ihashe likaTroy" Yiyo iseti yeencwadi ezili-10 xa zizonke Kuyo uJuan José Benítez, umbhali wayo, ubalisa ukuba kwakunjani ukubuyela emva ePalestine ngonyaka wama-30 wexesha lethu. Injongo yayo yayikukubhala nokuzimasa iintsuku zokugqibela zobomi bukaYesu waseNazarete, kwaye kuphakanyiswe ubungqina besayensi nobuchaseneyo, konke ngombono wegosa laseMelika elithatha inxaxheba kwiprojekthi eyimfihlo enjalo.
Ukuba unesibindi sokuyifunda, kuya kufuneka uyazi ukuba incwadi nganye imalunga namaphepha angama-400 ubude.
"IKato yokugqibela" (2001, Matilde Asensi)
Kule noveli, unongendi kunye nombhali wezinto zakudala kwisiXeko saseVictoria baphanda ukuqaqanjelwa kwesidumbu esifunyenwe somTopiya. Ukuba ufuna ukubona ukuba ndazi njani idibanisa ukukhangela intsalela yeVera Cruz (Umnqamlezo kaKristu), ihlelo eliyimfihlo lenkolo kunye neDante's Divine Comedy, awunakuyeka ukufunda lo mthengisi uthengisayo wenza ukuba umbhali wawo uMatilde Asensi aziwe kakuhle, nangona wayebhale ngaphambili ezinye iinoveli ezinje "Iacobus", ibiyi "ICato yokugqibela" incwadi yakhe ethengiswa kakhulu kwaye eyona yamkelwe.
Ukuba uyaluthanda olu hlobo lohlobo lwam ndicebisa ngezi ezinye izihloko:
"Ubuzalwana Bengubo Engcwele" nguJulia Navarro.
"Isibhozo" nguKatherine Neville.
"Ipendulum yefoucault" Ngu-Umberto Eco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezi-3 ngamayelenqe enkolo
IJorge Nexus (jorgeíritu) sitsho
Ungayibhala njani i-Foucault's Pendulum phakathi kwento enjalo? Kufana nokubeka, andazi, Ukunxanelwa ububi phakathi koluhlu lweemovie zedesktop yeTV ...
Phendula kuJorge Nexus (jorgeíritu)
Molo molo. Ngaba uyazi ukuba ngethuba ndingafumana ikhathoni yamvanje kwiivenkile zeGandhi? okanye ungandicebisa ukuba ndiyikhangele phi? Enkosi
Ezona ncwadi ziphikisayo zabantwana kwimbali